Sandwiched pakati pe UK, Holland, France neGermany inokonzera vazhinji kutarisa nyika iyi duku, yakanaka, asi Belgium iri chaizvo inofadza kuenda kune imwe nzvimbo yakasiyana.
Mukuwedzera kune nzvimbo yaro seguvhu rehurumende yepasi pose uye imba yeEuropean Union, Belgium zvakare inyika yakanyarara, ine runyararo umo munhu anogona kuwana zvokudya zvakanaka nezvinwiwa, makamisiyamu akanaka, uye zvizhinji zvokuita munzvimbo yakanyanya imwe yeEurope yakanyunguduka. Farira aya mazano ekufambisa nguva inotevera apo iwe uripo!
Nyika duku ine zvakawanda zvokuona, Belgium yakasanganiswa nenzira yechitendero pakati peGermany, Dutch, uye French hune hupenyu apo ichichengetedza unhu hwakasiyana.
Zvichienderana nekureba kwerwendo rwako, uye kutora nzvimbo yepakati penyika iri kuitika, iyi ndiyo nzira yedu yakakurudzirwa yeBelgium:
3 mazuva: kweBrussels
6 mazuva, Wedzera: Antwerp, funga zuva rekuenda kuRotterdam
8 mazuva, onai: Ghent
10 mazuva, Wedzera: Bruges neFlanders Fields, funga nezvezuva rekuenda Dunkirk
Guta guru: kweBrussels
Language: Belgium yakakomberedzwa nemativi matatu neNetherlands, France neGermany, zvichiita Dutch, French uye German zvese zvinonyanya kukosha mitauro inenge yakashandiswa zvakafanana. Chirungu chinowanzotaurwa, uye vatauro veChirungu havafaniri kunge vane matambudziko ekufamba-famba.
Power Adapter: MuBelgium zvigaro zvemasimba ndezvomugwaro E. Mhepo yakakwana ndiyo 230 V uye inowanzonyoresa iyo 50 Hz.
Mhosva uye kuchengetedzwa: Belgium yakagara iine guta rakachengeteka, uye inoramba iripo zvisinei nezvinoitika zvegandanga muBrussels nedzimwe nzvimbo dzakapararira. Kunyange zvakadaro, mukana wekupembera kurwisa unoramba uri muduku, uye mumwe anofanirwa kufara nekufambisa paanenge achifunga nezvemazuva ose anotora zvigaro zvinowanzoitika munzvimbo dzakawanda dzinofamba.
Verenga Zvakawanda Pamusoro peBelgium!